Posted by မြရွက်ဝေ at 11:38 AM
Happy 7th anniversary !!
7th -ဆိုတာ အိမ်ထောင်သက်လား၊
ဘယ်အသက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပါ စီနီယာက စီနီယာပါ။
အမ ရေ HAPPY 7th Year Anniversary :)
သက်ဆုံးတိုင် ရိုးမြေကျ ဖြစ်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပါတယ်။
အားလုံးသို့---> ဂျစ်သက်တမ်းပါ။ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် မောင်လေးမွေးနေ့လဲ ဖြစ်နေတယ်။ :P
7 years..3 more to go for 10th!!
wishing sis n ur lovely ain thu gyi..many years to come!
cheers..toablessed life!!
စကားမစပ် မြရွက်ဝေကို ပြောချင်လို့
- (ခေတ်ဟောင်းဖြစ်ဖြစ်၊ ခေတ်ပေါ်ဖြစ်ဖြစ် ဂျပန်ဝတ္ထုတိုတွေ ဘာသာပြန်ပြီး ဘလော့ဂ်မှာတင်ပါ့လား။)
- ဂျပန်စာတွေသင်နေတယ်ထင်လို့ တောင်းဆိုကြည့်တာ။ အချိန်အားပြီး စိတ်ရောပါမှပါ။
ချစ်သက်တမ်း ၇ နှစ်ပြည့်ဆိုတော့ အမထက် တော်တော်ကို စီနီယာကျတယ်ပြောရမယ်.. ချစ်သက်တမ်း၊ အိမ်ထောင်သက်တမ်း .. ဘယ်လို Anniversary ပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီသီချင်းလေးလိုပေါ့ .. “နေမ၀င်အချစ်တွေ ~~ အချစ်ကိုပေးမယ် ~~ ယနေ့မှစ နှစ်တစ်ရာတိုင်ကွယ်.. ”
ယနေ့မှ နှစ် ၁၀၀ တိုင် အတူတကွလက်တွဲသွားနိုင်ပါစေ..
ညီမDilo---> တောင်းတဲ့ဆုနဲ့ ပြည့်ပါရစေနော်။
ကိုဇနိ---> ဘယ်လိုစာမျိုး ဘာသာပြန်ရမှန်း မသိလို့။ ရှိတာက ကျောင်းစာအုပ်တွေဘဲလေ။ ဝတ္တုစာအုပ်က သူဝယ်ထားတဲ့ ဟာတွေရှိပေမယ့် levelမြင့်ပြီး အရှည်ကြီးတွေမို့ တခါမှ မဖတ်ဖူးဘူး။ အပျင်းထူနေတာလဲ ပါတာပေါ့။:D ဘာသာပြန်ချင်တဲ့စာအုပ်ရှိပေမယ့် ကာတွန်းစာအုပ် ဖြစ်နေလို့။
မnu-san---> နှစ်၁၀၀တိုင်အောင် အသက်ရှည်ရင် နှစ်ယောက်လုံး သူငယ်ပြန်နေလောက်ပြီထင်တယ်နော်။ ဘယ်က အဘိုးကြီး အနားရောက်နေပါလိမ့်လို့ ထင်နေမိမှာ။ :D:D
ဝေး - ၃ ၄ မျက်နှာလောက်ရှိတာကို ရှာပြီး ဘာသာပြန်ပါ့လား၊ အင်တာနက်မှာလည်း စာတွေက ပေါလောက်တယ်။ ဖတ်ဖူးချင်လို့ပါ။